Qarax lala beegsaday Tareen mara Dhulka Hoostiisa London. – Hornafrik Media Network
Qarax lala beegsaday Tareen mara Dhulka Hoostiisa London.
By HornAfrik	 Last updated Sep 15, 2017
Qarax ayaa lala beegsaday tareen ka mid ah kuwa London ee dhulka hoostiisa mara, waxaana lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah rakaabka tareenkaasi ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa ayaa dhacay 08:20 xilliga London, waxaana booliska iyo howlwadeennada caafimaadka ay gaareen goobta uu ka dhacay oo ah boosteejada Parsons Green ee Fulham.
Sawirro laga soo qaaday tareenka ayaa muujinaya in xajmiga qaraxa uu koobnaa, oo aanu geysan burbur muuqda.
Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dhowr qof oo dhaawacya qaba.
Booliska la dagaallanka argagixisada ayaa sheegay inay qaraxa ula tacaalayaan inuu yahay “fal argagixiso.”
Askar hubaysan ayaa la geeyay goobta uu qaraxa ka dhacay.
Sawiro in la cadayn karin Sax ahaantooda oo la soo galiyay Baraha Bulshadda ayaa muujinaya Caag Cad oo ku dhex jira Bacaha looga adeegto Supermarket yadda oo Holac ka baxayo Qaybta dambe ee Tareenka, Isla markaana ay ka muuqdaan Fiiliiyin, waxaana la aaminsan yahay inay Walxaha qarxay ay caagaas ku jireen.
“waa xilli hore in la xaqiijiyo waxa sababay Dabka, waxaana socda Baaritaano ay wadaan Booliska La Dagaalanka Argagixisadda,” sidaasna waxaa lagu sheegay war kooban oo goor dhawayd oo Boolisku soo saareen.
Shirkadda Gaadiidka London waxay sheegtay in baaritaan la xiriira Dhacdadii Parsons Green uu socdo, Waxayna ku wargaliyeen Macaamiishooda u socota inta u dhaxaysa Wimbledon iyo Earls Court inay isticmaalaan Jidad kale.
Britain waxaa ka dhacay 4 Qarax Sannadkan, kuwaasoo ay ku dhinteen 36 Qof.
Qalabka loo malaynayo in Qaraxa loo isticmaalay.
Maraykanka oo Muwaadiniintiisa uga digay in ay tagaan 6 Gobal oo ka mid ah Kenya Cabsi laga qabo Al-Shabaab.
Axmad Madoobe oo Gaaray Gobalka Gedo, Muxuu la xiriiraa Socdaalkiisu,?+Sawiro